Baarlammaanka Soomaaliya oo ansixiyay matalaadda gobolka Banaadir - Calanka.com
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa si aqlibiyad leh u ansixiyay in gobolka Benaadir uu matalaad 13 xubnood ah ku yeesho Aqalka Sare.
142 xubnood ayaa u codeysay ansixinta moshinkan iyadoo 4 xubnod oo kali ah ay diideen.
Tallabadaani ayaa ka dhigeysa in Aqalka Sare ay tiradiisa guud noqon doonto 67 Senator, halka markii hore uu ka ahay 54 Senator oo Maamul goboleedyada matalayay.
Waxaa mooshinkan baarlamaanka horkeenay ilaa iyo 13 xubnood oo ka tirsan baarlamaaanka.
Muranka ku saabsan maqaamka iyo matalaada gobolka Benaadir ayaa in muddo ah soo jiitamayay.
Dhawaan ayay guddiga wadajirka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay labada Aqal u gudbiyeen talooyin ku aadan matalaadda gobolka Benaadir, qoondada dumarka iyo xildhibaannada matala gobollada waqooyi iyo sida loo dooranaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay go’aanka baarlamaanka.
“Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxay ka jawaabeen dareenka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan rajada bulshada Caasimadda. Waa guul weyn in Muqdisho ay hesho qoondo ku saabsan matalaad Aqalka Sare, waayo waa caasimaddii Qaranka, waa astaanta dowladnimadeena, waana muraayaddii dadka iyo dalka Soomaaliyeed, ayuu yiri Farmaajo oo soo saaray war saxaafadeed.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, oo ah gudoomiyaha guddigaasi wadajirka ayaa mar sii horreysay BBC-da u sheegay inay ahmiyad siyeen sida shacabka gobolka Banaadir matalaad u heli lahaayee.n
“Aqalka sare ayaa jiro oo maamulladii oo dhan matalaya, gobolka banaadirna maamul buu leeyahay, caasimaddiina way ku taallaa, dadka kasoo jeeda deegaankaas – oo umadda Soomaaliyeed oo dhan ka koobanna – dadaal badan bay wadeen, baaqyo badan bay soo jeediyeen, oo ay leeyihiin xuquuq baan leenahay, waana in goleyaashii nalagu matalo, waxaana u baahan nahay in baaqeenna laga jawaabo. Marka taas bay ku saabsaneyd inuu baarlamaanka go’aan ku gaaro, cid gaar ahna waxba kama dhihi kart”, ayuu yiri Isaaq Yarrow.
Golaha Shacabka ayaa isbuucii hore sidoo kale Aqlabiyad ku ansixiyay talooyinkii uu soo jeediyay guddiga isku dhafka ee qoondada dumarka ee doorashada iyagoo ku taliyay in kuraasta ay haatan dumarka ku fadhiyaan ay dumar oo kale ku tartami karaan.
Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi oo lagu wado in ay berito ku kulmaan magaalada Jabuuti